Golaha wasiiradda cusub oo maanta kulan xasaasi ah ka yeelanaya laba arrimood (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiiradda cusub oo maanta kulan xasaasi ah ka yeelanaya laba arrimood (AKHRISO)
Waxaa maanta lagu wadaa in golaha wasiiradda cusub ee xukuumada Soomaaliya ay kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshaan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoona kulankaasi uu shir guddoomin doonno ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Golaha wasiiradda cusub oo maalintii shalay codka kalsoonidda ah ka helay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta uga hadli doonno labo qodob oo muhiim.
Qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah xoojinta gurmadka abaaraha dalka iyo sidoo kale arrimaha amaanka, gaar ahaan amaanka magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeysay faraha kasii baxaayay.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo maalintii shalay warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in xilligaan la joogo xilligii wax laga qaban lahaa ammaanka dalka islamarkaana lasoo afjari lahaa kooxaha argagaxisada ah ee Xarakada Al-shabaab.
Kulankaan ayaa la filayaa in markii uu soo gaba-gaboobo laga soo saaro go’aamo waxtar leh, islamarkaana si deg deg ah wax looga qabanaayo abaaraha ka jira dalka iyo sugidda amniga dalka, gaar ahaan tan magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntii, maalmaha soo socdo ayaa sidoo kale la filayaa in wasiiradda cusub ee maalintii shalay helay codka kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya ay xilalkooda si rasmi ah ugala wareegaan wasiiradii hore, si ay ula yimaadaan waxqabad deg deg ah.